Google Play wuxuu bilaabaa inuu ogeysiiyo wixii ku saabsan codsiyada tayada leh | Androidsis
Eder Ferreno | | Codsiyada Android, Noticias
Google Play muddo ayuu isbadal ku jiray. Dukaanka barnaamijka Android wuxuu rabaa inuu diirada saaro gaar ahaan ciyaaraha iyo barnaamijyada hadda. Sidaa darteed, wax ka beddelka iyo shaqooyinka cusub ayaa lagu soo rogay arrintan. Mid ka mid ahi waa hawl cusub oo in yar oo adeegsadeyaal ahi ay helayaan xilligan. Kuwani waa ogeysiisyo qaab talo bixin ah, oo aan uga hadlayno barnaamijyo tayo leh.
Google Play waxaan horeyba uga helnay xulashada tifaftireyaasha, kuwaas oo ah barnaamijyadan aadka ufiican, kuwaas oo soo dejintooda lagu taliyay. Intaa waxaa sii dheer, waxaan haynaa abaalmarinno dhowr ah oo shirkaddu siiso cayaaraha iyo codsiyada, sida abaalmarinta cayaaraha. Laakiin hadda waxay rabaan inay hal talaabo hore u qaadaan astaantooda cusub.
Waa ogeysiis taxane ah oo leh wuxuu doonayaa inuu ku wargeliyo dadka isticmaala codsiyada tayada leh gudahood qayb gaar ah. Waxaa horey u jiray isticmaaleyaal ku shaqeeya Android oo bilaabay inay helaan, kiiskooda qeybta sawir qaadista ee Google Play. In kasta oo xilligan aan la ogeyn goorta shaqadan loo bilaabi doono hab guud oo loogu talagalay dhammaan isticmaaleyaasha.
1 Ogeysiiska Ciyaar Google: Muuqaal Cusub
2 Ogeysiisyada Google Play
Ogeysiiska Ciyaar Google: Muuqaal Cusub
Ogeysiinta ayaa ka muuqan doonta shaashadda taleefanka Android. Sawirka kore waxaad ku arkeysaa habka ay isticmaaleyaashii ugu horeeyey ay horeyba uga heleen is ogeysiisyadan Google Play. Waxay ka hadlaan barnaamij gaar ah iyo isticmaalaha waxaa lagu casuumay inuu soo galo dukaanka. Sidan oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad waxbadan ka ogaato arjiga su'aasha ah. Shaki la'aan, waa hab cusub, oo lagu siinayo caan ka weyn codsiyada qaar u taagan gaar ahaan tayadooda.
Intaa waxaa dheer, in yar ayaa laga sheegay sababaha arjigan loogu taliyay. Marka waxaa jira fikrado ama qaar ka mid ah shaqooyinka ugu caansan ee dalabka su'aasha lagu xusay. Marka isticmaaluhu wuu awoodaa sii wad inaad kala soo baxdo Google Play Si fudud. Uguyaraan tani waa fikradda nidaamkan talo soo jeedinta ee cusub ee dukaanka ka jira, si dadka isticmaala looga dhaadhiciyo inay u soo dejiyaan barnaamijyadan.
Intaa waxaa dheer, daabacaadda su'aasha ah ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay qaybta ogeysiinta ee ku dhex taal Google Play Store. Isticmaalayaasha helay ogeysiisyada ugu horreeya dhowaan ayaa lagala tashaday arrintaas. Sida muuqata, sidii looga bartay, waxay heleen su’aal ay ku jireen la weyddiiyey inay rabaan inay kala socdaan wararka ama wararka Google. Kuwii ogolaaday waxay bilaabeen inay ku helaan ogeysiisyadan Android. Sida loo maleynayo, adeegsadayaasha yiri maya mahelaan nooc ogeysiis ah.
Ogeysiisyada Google Play
Waqtigan xaadirka ah waxay umuuqataa tan nidaamku waa wax aasaasi ah wuxuuna ku jiraa wajiga imtixaanka. In kasta oo hadda Google uusan waxba ka oran shaqadan. Waan ognahay in shirkadda Mareykanka laga leeyahay ay soo bandhigeyso isbeddellada ku yimid dukaankeeda, maaha sidaas boqolkiiba inta komishanka. Laakiin waxba kama aysan sheegin illaa iyo hadda muuqaalka. In kasta oo ay tahay aalad leh karti badan.
Maadaama aad taas heli karto tirada codsiyada laga soo rakibo Google Play ayaa kordhi doona gaar ahaan. In kasta oo ay weli tahay in lagu hagaajiyo dhinacyada qaarkood si hawlgalka ogeysiisyadani u wanaagsanaadaan. In kasta oo ay tahay jiho cusub oo danayn karta shirkadda Mareykanka.
Iskusoo wada duuboo, dhinaca shaqsiyeynta shaqsiyanku waa arin muhiim ah. Maaddaama ay jiri doonaan isticmaaleyaal oggolaada inay helaan ogeysiisyadan, laakiin si uun. Qofna ma doonayo inuu helo ogeysiis maalin kasta ama saacadaha oo dhan. Marka tan waxaa laga filayaa inay noqoto wax la nidaamin karo. Waxqabadka ugu wanaagsan.
Inkasta oo aynaan xog hayn ku saabsan sida ogeysiisyadu si gaar ah ugu shaqeyn doonaan on Google Play. Waqtigan xaadirka ah joogitaankiisu wuu xadidan yahay, suuqyada qaarkood ee gaarka ah. Marka waxaan rajeyneynaa inaan dhowaan ka helno macluumaad ku saabsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Google Play ayaa ku ogeysiin doona barnaamijyada tayada leh
Xiaomi Mi 8 Lite wuxuu heli doonaa qaabka Muuqaalka Habeenkii ee Mi MIX 3